सङ्घीयता जोगाउन जनता मारिनुपर्ने ! – देवप्रकाश त्रिपाठी - BP Bichar
Home/breaking/सङ्घीयता जोगाउन जनता मारिनुपर्ने ! – देवप्रकाश त्रिपाठी
सङ्घीयताले दिने भनेकै आन्तरिक द्वन्द्व र स्थायी तनाव तथा कष्टकर जीवन हो भन्ने तथ्य बुझेर पनि मौन रहने हो भने वर्तमानमा बाँचेका हामीले सास्ती पाउने त छँदै छ, भोलिको पुस्तालाई सग्लो नेपाल बाँकी राखिदिन सकिने अवस्था पनि रहने छैन । त्यसैले देश जोगाउनका निम्ति सङ्घीयता खारेज गर्न हामी सबै नेपाली ढिलाइ नगरीकन एकताबद्ध हुन आवश्यक भइसकेको छ । सङ्घीयताबाट नेपालले एक न एक दिन फर्कनैपर्ने हुन्छ, जति ढिला भयो त्यति नै बढी खति व्यहार्नुपर्ने भएकोले तत्काल फर्किएर देशलाई ठूलो क्षतिबाट जोगाउनु बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ ।
पाकिस्तानमा सञ्चारमाध्यममा लगाइएका सबै प्रतिबन्धहरु हट्यो